ktmkhabar.com - मन्दिरमा घन्टी किन बजाईन्छ ? यस्ता छन् धार्मिक साथसाथै वैज्ञानिक कारण पनि थाहापाउनुहोस्
मन्दिरमा घन्टी किन बजाईन्छ ? यस्ता छन् धार्मिक साथसाथै वैज्ञानिक कारण पनि थाहापाउनुहोस्
सोमबार, चैत्र २१ २०७८
हिन्दू धर्ममा प्रत्येक धार्मिक अवसरमा अवश्य घण्टी बजाइन्छ । घण्टीको आवाज त प्रत्येक मन्दिरको पहिचान हो र प्राचीन समयदेखि नै मन्दिरमा घण्टी बजाउने परम्परा छ । मन्दिरमा घण्टी जडान गर्नु र बजाउनुको धार्मिकका साथसाथै वैज्ञानिक कारण पनि छ ।
मन्दिरमा राखिएका सानाठूला घन्टीका आवाजले वातावरणलाई शुद्ध बनाउँछन् । घण्टीबाट निस्कने ध्वनि चमत्कारी हुन्छ । हावामा भएका सूक्ष्म कीटाणु हाम्रो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छन् । मन्दिरमा लगातार घन्टी बजाउँदा निस्कने ध्वनिले हानिकारक सूक्ष्म कीटाणुलाई नष्ट गरिदिन्छन् । घण्टीको आवाजले नकारात्मक ऊर्जाको असर बेकामे बनाइदिन्छ असन सकारात्मक वातावरण निर्माण गरिदिन्छ ।
नियमित रूपमा आरती गर्दा र लगातार घण्टी बजाउँदा मन्दिरमा स्थापित देवीदेवताका प्रतिमा चैतन्य हुन्छन् । यी प्रतिमाको पूजा बढी प्रभावशाली र शीघ्र फलप्रदायक हुन्छ । पुराणहरूमा बताइएअनुसार, मन्दिरमा घण्टी बजाउँदा अनेकौं जन्मका पाप नष्ट हुन्छन् । सृष्‍टिको प्रारम्भ हुँदा सुनिएको आवाज त्यही घण्टीको ध्वनि हो ।
बुझ्नु भएको छ फोनको साइडमा राखिएको यो लाइनको अर्थ के हो ?
मृत्यु भएको मान्छेको फेसबुक के हुन्छ ?
गुगललाई उछिन्दै टीकटक बन्यो विश्वमा सबैभन्दा बढी हेरिने अनलाइन
अर्काको कुरा काट्न प्रतिबन्ध लगाइएको अनौठो गाउँ
किन तात्छ मोबाइल फोन? यी कुरा ख्याल गरौं